Voaresaka ho voaloa ao amin'ny trano fitahirizam-bokatra ho an'ny sehatra tsy misokatra eo amin'ny seranana Istanbul | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulMitaky ny vola aloa amin'ireo sehatra tsy misokatra amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul
Mitaky ny vola aloa amin'ireo sehatra tsy misokatra amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul
07 / 01 / 2020 34 Istanbul, ANKAPOBENY, Airports, Highway, Headline, Faritra Marmara, TORKIA
mitaky ny vola aloa avy amin'ny vavahadim-panjakana mankany amin'ny sehatra tsy voatazona eo amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul
Iray amin'ireo dingana efatra amin'ny seranam-piaramanidina Istanbul, izay am-perinasa, no handoa vola noho ny fiantohana amin'ny mpandeha amin'ny sehatra tsy nisokatra.
SözcüRaha ny nambaran'i Basak Kaya, CHP Kocaeli lefitry ny Haydar Akar, dia tsy manokatra ireo dingana hafa amin'ny fiantohana ny mpandeha ny orinasa, hoy izy. Akar dia nanambara fa ny seranam-piaramanidina Istanbul dia nomena endrika modely-trano-famindrana ary nampahatsiahivina fa ny seranam-piaramanidina dia natolotry ny 25 tapitrisa tapitrisa Euro niaraka tamin'ny VAT nandritra ny 22 taona. Hoy i Akar:
Devlet Nanome antoka 61% ho an'ny seranam-piaramanidina vaovao ny governemanta. Adidy manokana, VAT, fandroahana amin'ny fomba amam-panao koa dia nomena. Ny saran-dalan'ny mpandeha azo antoka amin'ny seranam-piaramanidina BOT rehetra dia 15 Euros amin'ny zotra iraisam-pirenena ary 20 Euros eto. 3-2 Euro ao amin'ny seranam-piaramanidina an-trano sy 5 Euro eto. Ny seranam-piaramanidina dia misy dingana 4. Ny sehatra 3 sy 4 dia hatao arakaraka ny toe-javatra misy ny 1 sy 2. Ka tsy mazava kosa na dia efa vita aza izany. Raha misy ny fihenam-bolo, ny orinasa dia hanangana dingana 3 sy 4, ary raha tsy izany dia tsy ho izany. Inşa
Ho azon'ny mpandraharaha ny volany
Haydar Akar dia nanantitrantitra fa ny habetsaky ny mpandeha azo antoka dia haorina amin'ny fiheverana fa haorina ny dingana faha-3 sy faha-4. “Ny kaonty mpandeha tsirairay natao ho an'ireo dingana ireo. Ny dingana voalohany dia hahitana mpandeha 70 tapitrisa. Aorian'ny dingana faharoa, 2 tapitrisa ny fahafahan'ny mpandeha. Raha tafatsoaka ny 90 tapitrisa, dia haorina ny dingana fahatelo ary hisy 90 tapitrisa ho avy. Raha mijanona ny Stage 3 dia haorina ny Stage 20. Na tsy vita ny volany, ny orinasa miasa dia hahazo ny volany. Vokatry ny fifanarahana momba ny isan'ny fiara entinao sy ny fifanakalozana omenao, tsy afaka manangona vola ho an'ireo mpandraharaha ny governemanta. Manamboatra tonelina ianao amin'ny fomba mitovy. Izahay dia mahita an'izany sary izany eny amin'ny tany sy eny amin'ny rivotra. ”
Solombavambahoaka lefitry ny minisitry ny fitaterana, tambazotra fitaterana, ara-potoana, ny 10 taona lasa izay yapılan
By rail eo Alemaina sy Torkia TR Box Transport Manomboka
Fampahafantarana momba ny tolotra: Hividianana Safirim-bola (TUDEMSAS)
3 Aorian'ny Claim Dent. Airport Viewed Aerial
3. Fanamelohana ny fahafatesan'ny mpiasa nafindra tany amin'ny parlemanta
Niverina indray ny fangatahana ho any amin'ny seranam-piaramanidin'i Istanbul
Fanambarana nataon'ny DHMİ amin'ny filazana fa tsy afaka hiditra ao amin'ny seranam-piaramanidin'i Istanbul ny fiaramanidina
Fitarainana hividy ny Anjerimanontolo ao Istanbul
Nijanona ny fitakiana ny fizarana fizarana fizarana Istanbul Airport
Ny saram-pandraisan'i Sapanca haingana dia haingana
3. Ny sandan'ny mpiasa mpikarakara ny tetezana dia homena alohan'ny Ramadany
Ny tolona tonelina Eurasianina dia ho 4 dolara miampy VAT ... Ity no tiorka miaraka amin'ny OGS sy HGS…
630 an'arivony Lira famonoana ho an'ny fianakavian'ireo maty tao amin'ny tranoben'i Çaycuma
Fepetra takiana amin'ny tompon'andraikitra manara-maso ny fitaovana mampidi-doza
Tajikistan Afghanistan Fifanarahana momba ny fiaran-dalamby voasonia